sharcilaawayaasha | Apg29
Ninnaba yuusan idinku khiyaanayn sinaba.
Kaas imaatinkiisu waa sida shuqul Shayddaan oo wuxuu u sameeyey si xoog leh, oo leh been dhan calaamooyin iyo yaabab, iyo dhammaan seductions xaqdarrada ka mid ah kuwa lumaya, maxaa yeelay, iyagu ma ay aqbalin inay runta jeclaadaan oo kale, si ay u badbaadaan.
qarsoodi A sharxay
Bal eega, waxaan idiin sheegayaa wax qarsoon, oo dhan hurdo [dhiman] maayo waxaan, laakiin dhammaanteen waa layna beddeli doonaa, daqiiqad, ee bilig bilig ah isha ah, markii buunka ugu dambeeya. Waayo, buunku waa dhawaaqi doonaa oo kuwii dhintayna qudhunla'aan baa la sara kicin doonaa, waana layna beddeli doonaa.
Ha noqon Jaahiliinta
Laakiin aniga ma, walaalayaalow, inaad jaahil ka noqon lahaa ku saabsan kuwii dhintay [dhintay], waa in aad u murugoon sida kuwa kale oo aan rajo lahayn [in aan la badbaadiyey]. Waayo, haddaynu rumaysan nahay in Ciise dhintay oo haddana soo sara kacay, sidaas oo kale Ilaah la keeni doonaa kuwa kalaa kuwii Ciise isaga oo leh.
Waayo, tan waxaannu idiin sheegi ereyga Rabbiga, waannu ka kaas oo kuweenna nool oo hadha ilaa imaatinka Rabbiga, waxba waa iman ka hor [dhintay] kuwii dhintay. Waayo, Rabbiga qudhiisu samaduu kala soo degi doonaa qaylo amarkiisa leh, iyo codka malaa'igta sare iyo buunka call Ilaah, oo marka hore dhintay in Masiixa sara kici doonaa.
Haddaba, waxaan taas oo kuweenna nool oo hadha ayaa iyaga kor loola qaadi doonaa daruuraha dhexdooda Rabbiga u hawada kula kulanno. Oo sidaas daraaddeed mar walba waannu Rabbiga la jiri doonaan.
Sidaa darteed dhiiri hadalladan midkiinba midka kale kuwaas.
Wakhtiyada iyo xilliyada
Laakiin haddii wakhtiyada iyo xilliyada, walaalayaalow, waxaa jira uma baahna inaan idiin soo qoro. Waayo, waxaad si fiican u garanaysaan inay maalinta Rabbigu u imanayso sida tuug habeen u yimaado. Sidaa darteed, marka ay yidhaahdaan, Waa nabad iyo salaamad, ka dibna yimaado iyaga la ridey si lama filaan ah sida födslosmärtan naag inay umusho, oo iyana ma baxsan doono.
Laakiinse idinku, walaalayaalow, gudcur kuma jirtaan in maalintaasu idiin qabato sida tuug oo kale. Kulligiin waxaad tihiin carruurta nuurka iyo carruurta ee maanta. Annagu ma nihin kuwa habeennimada, midna gudcur ah.
Sidaas daraaddeed aynu aan hurdo sida kuwa kale, laakiinse aan soo jeedno oo aan feeyignaanno. Waayo, kuwa seexdaa, waxay seexan habeenkii, iyo kuwa sakhraanka ah waxaa u sakhraamiya ee habeenkii.
Laakiin innagoo kuwa maalinta ah waa in aan balwad lahayn, dhar rumaysadka iyo jacaylka laabgashiga, rajada badbaadada sida koofiyadda. Waayo, Ilaah ma na doorataan cadho, laakiin si aad u hesho inaynu ku badbaadno Rabbigeenna Ciise Masiix, kan inoo dhintay si aynu, in aan daawado ama hurdo, in isaga la noolaan.
Sidaa darteed, raaxada mid kale oo kale uppbygg, sida waxa kale oo aad samayn.
Ha lumin degenaan
Laakiin waxaannu idinku baryaynaa, walaalayaalow, wax ku saabsan Rabbi Ciise Masiix iyo ururkeenna aynu wada yidhi isaga, in aanad si degdeg ah, oo madaxiisa laga badiyay iyo noqdo cabsi, oo innaba ruuxa ama hadal, ama warqad kasta, sidii wax naga soo diray sidii maalinta Masiixa ahayd way dhowayd.
Ninnaba yuusan idinku khiyaanayn sinaba. Waayo, maalintii aan, haddii qashinka waa [socday inuu turjumo "tagay"] doonaa horay loo sameeyey, iyo ninka dembiga, wiilka halaagga maahee, ayaa shaaca ka qaaday, taas oo ah soo horjeeda oo isa sarraysiiya wax alla waxa Ilaah la yidhaahdo waa la caabuday oo u wada kor ku xusan, si ay wuxuu fadhiistaa macbudka Ilaah sida Ilaah, oo sheegtay in ay Ilaah u noqon.
Ha aad ku xusuusatid in aan kuu sheegay xaalkan, markii aan weli idinla jiray? Oo haatan aad u ogaato waxa ka hortagtaa si uu yaabaa in marka hore la isaga wakhtigiisa shaaca ka qaaday. Waayo, qarsoodiga dembigu haatan waa shaqaynayaa, laakiin kaliya ee uu ilaa iyo hadda, kuwaas oo caqabad ku saaro. Ka dibna mid ka mid ah sharcilaawayaasha, waxaa la muujin doonaa, kii Rabbiga la ruuxa afkiisa dili doonaa oo soo laabashada arki karo.
Oo sababtaas daraaddeed ayaa Ilaah u soo diri doonaa wax qalad kaga, Waa inaad rumaysataan been ah, in ay tahay in lagu xukumo, kuwa aan runta rumaysan, laakiin waxay u lahaa ay xaqdarrada ku farxay oo dhan.
1 Korintos 15: 51-52, 1 Th 4: 13-18, 1 Th 5: 1-11, 2 Th 2: 1-12